Pangea: chii zvazviri, hunhu, shanduko uye geology | Network Meteorology
ChiGerman Portillo | | Geology
Munguva dzekare makondinendi aive asina kurongwa sezvaari nhasi. Pakutanga kwezvose kwaingova nechimwe chete chikwekwe chikuru chaisanganisira nzvimbo hombe yepasi. Iyi kondinendi yakadaidzwa Pangea. Yaivapo panguva yekupedzisira Paleozoic uye Mesozoic mangwanani. Ino nguva ingangoita makore mazana matatu nemakumi matatu nemashanu emakore apfuura zvakaitika. Gare gare, angangoita mazana emamirioni emakore apfuura, iyi ivhu rakakura rakatanga kupatsanurwa nekufamba kwematetoniki mahwendefa ndokukamura makondinendi sekuziva kwedu nhasi.
Muchikamu chino tiri kuzokuudza zvese zvaunoda kuti uzive nezvePangea, shanduko uye kukosha kwayo.
2 Alfred Wegener naPangea
3 Tectonic ndiro kupatsanurwa
4 Pangea, yapfuura uye yemberi
Zvizhinji zvekondinendi iyi yaive yakadzika kumaodzanyemba kwenyika. Gungwa chete rakarikomberedza rakanzi Panthalassa. Hupenyu muPangea hwakanga hwasiyana nanhasi. Mamiriro ekunze aidziya uye hupenyu hwemhuka nezvirimwa hwakanga hwatosiyana. Dzimwe dzemhuka dzakararama mukati memakore zana nemamiriyoni zana nematanhatu ekuvapo kweiyi supercontinent yaive traversodontids uye iyo Shringasaurus chiratidzo. Idzi mhuka dzinozivikanwa nekuve nenyanga mbiri dzekumberi uye hurefu hwemuviri hwakawanda kana kushoma kunge mamita mana. Iwo matete ekutanga uye cicadas akaonekwa pane ino supercontinent. Nguva dzaenda Nguva yeTriassic apo zhinji dzinokambaira dzakabudirira. MaDinosaurs ekutanga akaumbwa akatsika paPangea.
Hazvina zvakawanda zvinozivikanwa nezve hupenyu hwemumvura sezvo zvisaririra zvisati zvawanikwa muPanthalassa Ocean. Zvinofungidzirwa kuti maammonoid, brachiopods, chipanji nemapeni dzaive mhuka dzaivapo panguva iyoyo. Uye ndeyekuti mhuka idzi dzakashanduka pamusoro pemakore. Kana iri maruva, aive ma gymnosperms aikunda. Miti iyi yaitsiva miti yese inogadzira spore.
Alfred Wegener naPangea
Uyu murume aive musayendisiti wechiGerman, mutsvagiri, geophysicist, wezvemamiriro ekunze uyo aizivikanwa nekuva iye muvambi wedzidziso ye Continental Drift. Ndiye murume uyu akatanga kuronga mazano ekuti makondinendi aive nekufamba kunononoka pamusoro pemakore. Iko kufamba hakuna kumbomira uye nhasi kunozivikanwa kuti kuri kukonzerwa ne convection currents muhembe dzePasi.
Iyi pfungwa yekufamba kwemakondinendi yakamutswa muna 1912 asi haina kugamuchirwa kusvika 1950, makore makumi maviri mushure mekufa kwake. Uye ndezvekuti ongororo dzakasiyana dze paleomaomagnetism dzaifanirwa kuitwa iyo chinangwa chaive chekuongorora pasi renyika remagineti parizvino munguva yakapfuura. Zvakare, chidzidzo ichi zvakare chakada kuziva nzvimbo yematareti etekoni munguva yakapfuura.
Izvo zvese zvakauya apo Alfred Wegener akatarisa atlasi uye akashamisika kana makondinendi emakondinendi achikwana pamwechete. Aya ndiwo maziviro aakaita kuti makondinendi akange ambobatana. Mushure mekudzidza kwenguva yakareba akakwanisa kutsanangura kuvapo kwenzvimbo huru yaakatumidza kuti Pangea. Kupatsanurwa kweiyi supercontinent kwaive kuita kunonoka kwazvo kwakatora mamirioni emakore uye kwakatanga kupatsanura mamwe ese epasi mativi akaumba makondinendi matanhatu anhasi.
Tectonic ndiro kupatsanurwa
Kubvira munhoroondo yese kune akawanda masayendisiti akaedza kudzokorora kuti mafambiro emakondinendi angave akange achibva kupi chinzvimbo chePangea kusvika nhasi. Inozivikanwa kubva kuongororo dzakasiyana siyana kuti tectonic mahwendefa anofamba nguva dzose sezvaanowanikwa pamusoro pechiso chepamusoro kana jasi. Iri jasi rinoratidzika rinoenderana nezvinhu zvejasi repasi. Aya maonerevhizheni mafungu ejasi anokonzera kutama kwemakondinendi nekuda kwekufamba kwevanhu vazhinji nekuda kwekusiyana kwekuwanda. Yakave yakawanikwa zvakare uko kune zviitiko apo mahwendefa anotsemuka uye anopatsanuka nekukurumidza.
Kumwe kutsvagurudza kwakaratidza kuti kupatsanurwa kwematare etekoniki kunoitika muzvikamu zviviri. Chikamu chekutanga ndipo panoratidzwa kufamba kwemakondinendi. Yechipiri ndeyekuti, mushure memamirioni emakore ekutatamura, mahwendefa anotetepa, kupaza, uye kupatsanurana, achirega mvura yegungwa ichiuya pakati pavo.
Hupenyu pamberi pePangea hwaive hwakasiyana zvachose. Iyo mainland uye hupenyu hazvina kusimuka neiyi supercontinent. Izvo zvisati zvaitika paive mamwe makondinendi akaita saRodinia, Columbia nePannotia. Mune fungidziro yedata, Rodinia akange aripo 1,100 miriyoni emakore apfuura; Columbia pakati pemakore zana nemazana masere nemazana nemazana mashanu emamiriyoni apfuura uye Pannotia ine data rakadai. Uku kufamba kwemakondinendi kunoratidza kuti mukati mamamirioni emakore makore kugoverwa kwepasi pano kunenge kwasiyana neikozvino. Izvi imhaka yekuti pasi riri kuramba richifamba. Ichokwadi kuti kugoverwa kwemakondinendi kwaive kwakasiyana zvachose mukati memamirioni emakore.
Pangea paakapa Gondwana neLaurasia mahombekombe ekutanga uye Atlantic neIndian Ocean dzakabuda. Mhenderekedzo yegungwa iyo yakakamura zvikamu zviviri zvepasi iyi yainzi Tethys.
Pangea, yapfuura uye yemberi
Kunyangwe hupenyu mune ramangwana huchave hwakasiyana, tekinoroji inotibvumidza kuti titangezve kuti pasi redu richaita sei mumakore mazana maviri nemakumi mashanu. Ino inguva ino apo inofungidzirwa kuti kuchave nekuchinja kukuru uye yakabhabhatidzwa zita rekuti Pangea Ultima kana Neopangea.
Zvese izvi ingori fungidziro, tsananguro dzinoramba dzichigadzirwa nemasayendisiti akadzidza mafambiro etikitoni mahwendefa kwemakore mazhinji. Kana ivhu rikasatambura nekukanganiswa nema asteroid, chimwe chiitiko chinokwanisa kushandura nzvimbo yese yepasi, zvinofungidzirwa kuti shoma kwazvo yeAtlantic Ocean ichasara nekuti vanhu vazhinji vemakondinendi vachasanganazve kuita nyika huru.
Africa inofungidzirwawo kurwisana neEurope neAustralia ichaenda kuchamhembe kunopedzisira yabatana nekondinendi yeAsia. Ndokunge, nyika yedu ichave chimwe chinhu chakafanana nezvayakaita makore angangoita makumi matatu nemakumi matatu nemashanu emakore apfuura.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezvePangea nehunhu hwayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Geology » Pangea